भारतमा पेगासस विवादको जाँच हुने, सुप्रिम कोर्टद्वारा विज्ञ टोली गठन - Technology Khabar
» ताजा समाचार » भारतमा पेगासस विवादको जाँच हुने, सुप्रिम कोर्टद्वारा विज्ञ टोली गठन
भारतमा पेगासस जासूसी मामलाको जाँच गराउनुपर्ने भनी परेको याचिकामाथि सुप्रिम कोर्टले फैसला सुनाएको छ। कोर्टले यो मामिलाको जाँचका लागि विज्ञ टोली गठन गरेको छ।
टोलीले सुप्रिम कोर्टका रिटायर्ड जस्टिस आर भी रविन्द्रनको अध्यक्षतामा काम गर्ने बताइएको छ।
कोर्टले यो समितिलाई पेगासससँग सम्बन्धित आरोपहरुमाथि जाँचपड्ताल गरेर कोर्टलाई प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ। ८ हप्तापछि यस सम्बन्धमा फेरि सुनुवाई गरिनेछ।
पेगासस सम्बन्धी जाँच पड्तालको समितिमा पूर्व आईपीएस अफिसर आलोक जोशी, इन्टरनेशनल अर्गनाइजेशन अफ स्ट्यान्डर्डाइजेशन सब-कमिटीका अध्यक्ष डा. सन्दीप ओबेरोय पनि समावेश हुनेछन्।
यसबाहेक साइबर सेक्युरिटी तथा डिजिटल फोरेन्सिकका प्रोफेसर डा. नवीन कुमार चौधरी, इन्जीनियरिङका प्रोफेसर डा. प्रभाकरन पी तथा कम्प्यूटर साइन्स एन्ड इन्जीनियरिङका एसोसिएट प्रोफेसर डा. अश्विन अनिल गुमस्तेसहितका तीन प्राविधिक सदस्य पनि रहनेछन्।
सुप्रिम कोर्टले प्रत्येक जनाको गोप्यताको रक्षा हुनुपर्ने बताएको छ। पेगासस मामलामा देशका थुप्रै पत्रकार तथा एक्टिभिस्ट उजुरी दिएका थिए। उनीहरुले सुप्रिम कोर्टका न्यायाधीशको निगरानीमा जाँच पड्ताल गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।
उजुरीकर्ताहरुले सेना स्तरको स्पाइवेयरमार्फत् जासूसी गर्नु वैयक्तिक अधिकारको उल्लंघन भएको बताएका छन्। पत्रकार, डक्टर्स, वकिल, अभियन्ताहरु, मन्त्री तथा विपक्षी दलका नेताहरुका फोन ह्याक गर्ने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतको अधिकार खुम्च्याउनु रहेको उनीहरुको भनाइ थियो।